ट्याक्सी व्यवसायी र मिटर भाडा | eAdarsha.com
ट्याक्सी व्यवसायी र मिटर भाडा
विकासको मेरुदण्ड सडक यातायात हो भन्ने कुरामा कसैको दुर्इ मत हुन सक्दैन। सडक यातायात व्यवस्थित हुनका लागि के के कुरा हरु व्यवस्थित हुनुपर्दछ भन्ने विषयमा सडक यातायात र सम्बन्धित विषयमा ज्ञान भएको व्यक्ति संघ संस्था र सहकारी निकायले नियम कानून र व्यवहारिक पक्षलाई तुलनात्मक रुपमा समानान्तर हिसावले अगाडि बढाउन सक्नु पर्दछ।
विषय र सर्न्दर्भ ०७४ पौषको अन्तिम साता पोखरामा ट्याक्सी माथि एकाएक धरपकड र गि रफ्तारी गरिएको कुराको हो। विषय थियो ट्याक्सीमा भाडाका लागि मिटर सञ्चालन किन गरिएन भन्ने। ट्याक्सीको मिटरका विषयमा कुरा गर्ने हो भने २०५३ सालबाट पोखरामा मिटर सिष्टमको सुरुवात भयो त्यो स्वभाविक र व्यवहारिक थियो। क्रमशः लागु हुदै गएको पनि थियो।
मिटर सिष्टममा सबै परिवर्तन ल्याउन यातायात व्यवस्था विभाग, गृह मन्त्रालय, नाप तौल तथा गुणस्तर विभाग मार्फत मंहगिको आधारमा भाडा समायोजन गर्न मिटरमा शील हानेर रिन्यु गर्दै संचालन गर्दै जाने प्राविधिक विषयमा वार्ता गरिएको थियो। सो विषयलाई कार्यान्वयन गर्न महंगीको आधारमा प्रत्येक आर्थिक वर्षको कति प्रतिशत बृद्धि गर्नु पर्ने हो सो को प्रावधान तय गर्नु पर्ने हो। जसलाई सेवा ग्राही र उपभोक्ताले पनि स्वीकार गर्नु पर्ने विषय थियो ।
जसलाई सरकारी तवरबाट प्रत्येक आर्थिक वर्षमा समायोजन गर्नु पर्ने र सो तोकिएको भाडालाई यातायात व्यवसायीले पालन गर्नुपर्ने तथा सो पालना नगरेमा कानून विपरीत ठहर्ने भनिन्छ। तर सरकारी पक्षबाटै यस सम्बन्धमा उदासीनता र ढीलासुस्ती हुन्छ भने जनता त्यसको जिम्मेवार कसरी हुन्छ। २०६९ साल भन्दा पछाडि समायोजन नगरिएको भाडालाई २०७४ सालमा आएर एकाएक पालना गरिएन भनेर कारवाही गर्ने कुरा कतिसम्म सही हो ? सचेत वर्गले सोच्नु पर्दछ।
कानूनको उल्लंघन यातायात व्यवसायीले गरेको छ कि सरकारी पक्षबाट भएको छ ? यसको विषयमा स्पष्ट बहस हुनु आवश्यक छ। एउटा भाडाको ट्याक्सीमा मिटर भन्दा बाहेक भाडा असुल गराउन पाईदैन त्यो एक पक्ष ठीक छ। तर यात्रा गर्नेले मिटर भन्दा नन मिटर चढ्छु भन्छ भने त्यहाँ के हुन्छ ? के त्यहाँ पनि अनिवार्य हुन्छ ?
हरेक क्षेत्रमा नियमित अनुगमन हुनु पर्दछ। आज महंगी कुन हिसावले बढेको छ त्यहाँ कसको नजर पुगेको छ ? सम्बन्धित पक्षले स्वीकार्दा राम्रो होला। माग र आवश्यकता सबैका हुन्छन्, छानविन नै नगरी शक्तिको भरमा धरपकड गर्नु पनि अन्याय हो भन्ने हामीलाई लाग्दछ। पोखराका ट्याक्सी व्यवसायीहरु अन्यायमा परेको आभास यत्र तत्र भएको छ। व्यवसायीहरु प्नि महंगीको आधारमा भाडा समायोजन भएमा मिटरमा संचालन गर्ने चाहना व्यक्त गरिरहेका छन्।
- तुलसी दाहाल विर्खर्जी